M Diary Channel – Page 297 – Local and Sport News
A mattress that slides is usuallyagreat irritating issue that many sleepers absolutely hate.
Articles May 14, 2021 July 14, 2021
ကြာသပတေးနေ့ည နောက်ဆုံးရ ယူနိုက်တက်သတင်းများ
(၁) ယူနိုက်တက်သည် ဗဟိုခံစစ်နေရာအတွက် အတ္တလန်တာအသင်းမှ ခရစ္စတီယန် ရိုမဲယိုးအား ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေသည်။ (၂) ရိုမဲယိုးအပြင် မူလ ပစ်မှတ် ကစားသမားများဖြစ်သော လိုင်လီအသင်းမှ Sve
Articles May 13, 2021 May 14, 2021
ယူနိုက်တက်ကစားသမားဟောင်း ဗလင်စီယာ ဘောလုံးသမားဘဝက အနားယူ
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် နာမည်ကျော်ကစားသမားဟောင်း ဗလင်စီယာဟာ အသက်(၃၅)နှစ်အရွယ်မှာ နှစ်ပေါင်း(၂၀)ကြာကျင်လည်ခဲ့တဲ့ ဘောလုံးသမား ဘဝကနေ အနားယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အီကွေဒေါလက်ရွေးစင် ကစားသမားဟောင်း ဗလင်စီယာဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တုန်းက ဝီဂန်အသင်းကနေ ယူနိုက်တက်အသင်းဆီပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး
Articles May 13, 2021 May 13, 2021
အတ္တလန်တာနောက်ခံလူ ရိုမဲရိုးကို ခေါ်ယူဖို့ ယူနိုက်တက် စိတ်ဝင်စား
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ အသင်းခံစစ်ကို အားဖြည့်ဖို့အတွက် အတ္တလန်တာနောက်ခံလူ ခရစ္စရှန်ရိုမဲရိုးကို ခေါ်ယူဖု့ိစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ အသက်(၂၃)နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ အာဂျင်တီးနားနောက်ခံလူ ရိုမဲရိုးဟာ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကနေ အတ္တလန်တာအသင်းဆီ အငှားနဲ့လာရောက် ကစားနေသူဖြစ်ပြီး ဒီရာသီချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ ဘောလုံးဖြတ်ယူနိုင်မှုအကြိမ်
ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆုကို စိန်ခေါ်နိုင်ဖို့ လူအင်အားဖြည့်တင်းဖို့လိုတယ်လို့ ဘုတ်အဖွဲ့ကို ဆိုးလ်ရှားသတိပေး
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနည်းပြ ဆိုးလ်ရှားက လာမယ့်ရာသီမှာ မန်စီးတီးအသင်းနဲ့အပြိုင် ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆုကို စိန်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကစားသမားသစ်တွေ ထပ်ခေါ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ အသင်းဘုတ်အဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေကို သတိပေးစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့က လက်စတာကို အိမ်ကွင်းမှာ
ယူနိုက်တက်မှာ နောက်ထပ်‌ ရော်နယ်ဒို မြင်တွေ့ရတော့မှာလား ?
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့မှာ လက်စတာ ကို ( ၂ – ၁) ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမယ့် မေဆန် ဂရင်းဝုဒ်ကတော့ နောက်ဆုံး (
ပရိသတ်တွေရှေ့မှာ အမြန်ဆုံးပြန်ကစားချင်နေပါပြီ – ကာဗာနီ
ရာသီကုန်မှာ ယူနိုက်တက်ကနေ ထွက်ခွာပြီး ဘိုကာဂျူနီယာအသင်းထံ ရောက်ရှိတော့မယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှုး ကာဗာနီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၁၀ ရက်နေ့မှာတော့ အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း တိုးခဲ့လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အိုးလ်ထရက်ဒ်ဖို့ဒ်ကွင်းအတွင်း ပရိသတ်ရှေ့မှောက်မှာ အမြန်ဆုံးပြန်ကစားချင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကာဗာနီဖွင့်ဟ
ယူနိုက်တက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးမိအေး နှစ်ခါနာ အဖြစ်မျိုး မဖြစ်လိုတဲ့ ဆန်ချို
ယူနိုက်တက်ဟာ ယခုဘောလုံးရာသီ ကုန်ဆုံးပြီးနောက် လာမယ့် နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့စျေးကွက်မှာ အသင်းကို ကစားဖြည့်တင်းမှု ပြုလုပ်သွားဖို့ရှိနေပြီး ဂိုးသမားနေရာ ၊ ခံစစ်နေရာ ၊ တောင်ပံတိုက်စ်နေရာ တို့အတွက် ကစားသမားသစ်တွေ
Characteristics, Varieties And best slots to play online Lingo Of Online Slot machine games
Characteristics, Varieties And best slots to play online Lingo Of Online Slot machine games When
Articles May 12, 2021 July 9, 2021
1 … 295 296 297 298 299 … 388